DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA 2021- 887 Manambara ny fahataperan’ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika
DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA 2021- 887
Manambara ny fahataperan’ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika
Araka ny Lalàmpanorenana, ao amin’ny andinin’ny faha 61 ;
Araka ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mahakasika ny Vanim-potoana manokana ; Araka ny lalàna laharana faha 2011-002 tamin’ny 15 jolay 2011 mikasika ny fifehezana ny fahasalamam- bahoaka ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-1407 tamin’ny 19 jolay 2019 manendry ny Praiminisitra, lehiben’ny Governemanta ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-070 tamin’ny 29 janoary 2020 sy ny didim-panjakana laharana faha 2020-997 tamin’ny 20 aogositra 2020 manendry ny mpikambana ao amin’ny Governemanta ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-390 tamin’ny 03 aprily 2021 manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-443 tamin’ny 17 aprily 2021 manambara ampahibemaso ny Fanitarana ny fe- potoanan' ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-485 tamin’ny 02 may 2021 manambara ampahibemaso ny fanitarana ny fe-potoanan' ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-528 tamin’ny 16 may 2021 manambara ampahibemaso ny fanitarana ny fe-potoanan' ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-597 tamin’ny 30 may 2021 manambara ampahibemaso ny fanitarana ny fe-potoanan' ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-625 tamin’ny 13 jona 2021 manambara ampahibemaso ny fanitarana ny fe-potoanan' ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-685 tamin’ny 27 jona 2021 manambara ampahibemaso ny Fanitarana ny fe-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-718 tamin’ny 11 jolay 2021 manambara ampahibemaso ny Fanitarana ny fe-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-795 tamin’ny 08 aogositra 2021 manambara ampahibemaso ny Fanitarana ny fe-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-848 tamin’ny 23 aogositra 2021 manambara ampahibemaso ny Fanitarana ny fe-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny Repoblika ;
Nandritran’ny Filankevitry ny Minisitra, taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram- pirenena, ny Filohan’ny Antenimieran-doholona sy ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana;
DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PANJAKANA MANARAKA IZAO:
Andininy Voalohany : Tapitra ny hamehana ara-pahasalamana izay nambara manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara nanomboka tamin’ny 3 aprily 2021.
Andininy faharoa : Ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana , ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, ny Minisitry ny Filaminambahoaka, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina , ny Minisitry ny fampiroboroboana sy fanovàna ny haitao ara-kajy mirindra, ny Paositra ary ny fifandraisan-davitra, ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pierenena misahana ny Zandarimaria no miantoka ny fanatanterahina izao didim-panjakana izao.
Andininy fahatelo : Nohon’ny hamehana ary ho fampiharana ny voalazan’ny andininy faha 4 sy andininy faha 6 andalana faha 2 amin’ny didy hitsivolana laharana 62-041 tamin’ny 19 septambra 1962 momba ny fepetra ankapoben’ny lalàna anatiny sy ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fifandraisana manokan’ny samy olona, ity didim-panjakana ity dia manan-kery avy hatrany raha vantany vao havoaka amin’ny onjampeo sy/na ny fahitalavitra, ary izany dia tsy miankina amin’ny famoahana azy amin’ny Gazetimpanjakan’ny Repoblika.
Antananarivo faha a 03 septambra 2021
Ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena
Général de Corps d’Armeée Leéon Jean Richard RAKOTONONIRINA
Ny Minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola
Ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka
Contrôleur Général de Police Fanomezantsoa Rodellys RANDRIANARISON
Ny Minisitry ny paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra
Ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena misahana ny zandarimariam-pirenena
Général de Division Serge GELLE
Ny Minisitry ny Fitsarana
Ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana
Pierre Houlder RAMAHOLIMASY
Ny Minisitry ny Fahasalam-bahoaka
Professeur Zely Arivelo RANDRIAMANANTANY
Ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina
Industrialisation de Madagascar : Le président Andry Rajoelina reçoit les opérateurs du Secteur BTP
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUECOMMUNIQUE Industrialisation de Madagascar : Le président Andry Rajoelina reçoit les opérateurs du Secteur BTP
Le Président de la République, en présence